Isiguli saseThekwini sithole i-Covid-19 kabili | Scrolla Izindaba
Udokotela waseThekwini uthi esinye seziguli zakhe sihaqwe i-Covid-19 kabili ezinyangeni ezintathu.
UDokotela uYuvan Maharaj, osebenzela edolobheni lase-Prospection, uthe isiguli sahlolwa okokuqala mhla ziyisishiyagalolunye kuNdasa.
Ube esehlolwa watholakala engasenalo igciwane ngemuva kwamasonto amabili, waphinda futhi wahlolwa watholakala enegciwane mhla zi-14 kuNtulikazi.
Iphephandaba i-The Witness libika ukuthi i-National Institute for Communicable Diseases (NICD) ilibhekeli leli cala.
Kuke kwaba nemibiko yokuphinda ibuye kwamanye amazwe, futhi imibono ithi ukululama kuleli gciwane emuva kokuba utholakale nalo akubi isikhathi eside ngoba lisengabuye likuphathe futhi. Lesi yisimo sokuqala esirekhodiwe sokuphinde utheleleke kabusha ngegciwane eNingizimu Afrika.